विरामी हुँदाहुँदै पनि मानिस किन काम गर्छ ? – MEDIA DARPAN
विरामी हुँदाहुँदै पनि मानिस किन काम गर्छ ?
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Mar 28, 2019
ब्रिटेनमा सन् १९९३ यता विरामी भएर छुट्टी लिनेको संख्या लगभग आधा भएको छ । अफिस फर नेशनल स्टेटिस्टिकका अनुसार पहिले पहिले विरामी परेकै कारण मानिसहरु वर्षभरी औसतमा ७ दशमलव २ दिन विदा लिने गर्थे । सन् २०१७ मा यो संख्या केवल ४ दशमलव १ दिनमा सिमित भयो ।
लण्डनस्थित इम्पेरियल कलेजको इन्फेक्शियस डिजिज इपिडिमियोलोजी विभागकी शोध एसोसिएट काइली एन्सलाईका अनुसार चिकित्सा क्षेत्रमा भएको प्रगतिका कारण यो बदलाव सम्भव भएको हो । तर, यसको मतलव यो हैन कि मानिसहरु कम विरामी भैरहेका छन् ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार कार्य संस्कृतिमा आएको बदलावका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको छ । यो बदवालका कारण छुट्टी लिदा आफ्नो हाकिमले विश्वास नगर्ने वा विरामी हुनुलाई बहानाको रुपमा बुझ्ने भएकाले पनि कयौ कर्मचारी विरामी हुदाँ पनि काममा जाने गर्छन् ।
चिकित्सकहरुका अनुसार सुरुवाती चरणमा ज्वरो सर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसैले, यो समयमा संक्रमित कर्मचारी तथा सहयोगीहरुले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि कार्यालयबाट छुट्टी लिन आवश्यक छ ।
कार्य संस्कृतिमा देखिएको परिवर्तनका कारण छुट्टी लिनुलाई दागको रुपमा हेरिने थालेको विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
बि्रटेनको एक बिमा कम्पनी एक्सा पीपीपीले सन् २०१५ मा गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार अविश्वास पैदा हुने डरले पनि लगभग ४० प्रतिशत कर्मचारी आफू विरामी हुदाँहुँदै पनि विरामीको असली कारण आˆनो मेनेजरलाई बताउँदैनन् ।
आˆनो कर्मचारीले छुट्टी नलिउन् भन्ने चाहना राख्ने हाकिमहरुले आˆनो स्वास्थ्य, आˆनो उत्पादकत्वको साथमा आˆनो सहयोगीको स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आˆनो अस्वस्थताबारे सञ्चालकहरुलाई कसरी बताउने भन्नेबारे जान्न आवश्यक छ ।
यसका बाबजुद पनि केही हाकिम विरामी हुनुलाई किन अपराध ठान्छन् ?
यसका बाबजुद पनि यस्ता कयौ अफिसरहरु छन्, जो आˆना कर्मचारी नदेख्नासाथ उनीहरुमाथि अविश्वास गर्न थाल्छन् । उनीहरुलाई आˆनो कर्मचारी माथि अलिकति पनि रत्तिभर पनि भरोसा हुँदैन । वाणिज्यिक सम्पदा कम्पनी स्टाइल्स कर्पोरेशनका मानव संसाधन उपाध्यक्ष जर्ज बाऊका अनुसार यस किसिमको प्रवृत्ति पुरानो पुस्तामा धेरै छ । उनीहरुले कहिल्यैपनि यो कुरा मान्न तयार नै भएनन् कि घर बसेर पनि राम्ररी काम गर्न सकिन्छ ।
अविश्वास र धेरै भन्दा धेरै उत्पादकको खोजीले प्रबन्धकहरुलाई विरामी परेर छुट्टी लिदा पनि आˆना कर्मचारीहरु माथि शंका गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
अध्ययनमा यो पनि पाइएको थियो कि मानसिक समस्याका कारण अनुपस्थिति हुने ३९ प्रतिशत कर्मचारीले मात्र अनुपस्थितिको सही कारणबारे आˆनो हाकिमलाई बताएका थिए । शारीरिक समस्यामा भने ७७ प्रतिशतले सही कारण बताएका थिए ।
चार्टर्ड इन्टिच्यूट अफ पर्सनल डेभलभमेन्टका अनुसार पछिल्लो केही दशक यता प्रेजेन्टिज्मको समस्या तीन गुणाले बढेको छ । सन् २०१८मा एक हजार भन्दा बढी मानिसहरुमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार ८६ प्रतिशत मानिसले पछिल्लो वर्ष आˆनो कार्यालयमा यस किसिमको समस्या रहेको महसुस गरे । जुन २०१० मा जम्मा २६ प्रतिशत थियो ।
एक्सा पीपीपीको साना तथा मझ्यौला उद्योगका निर्देशक ग्लेन पार्किन्सनले सन् २०१५ मा लेखेका थिए, प्रबन्धक आˆना विरामी कर्मचारीको दशा बुझन् अलिकति पनि कोशिश गर्दैनन् । त्यसैले, कर्मचारीहरुलाई आˆनो अस्वस्थताबारे बताउन समस्या हुने गर्छ । अफिस सञ्चालकहरुले आˆनो कर्मचारी माथि विश्वास गर्नुपर्छ । र, सम्भव भएसम्म उनीहरुलाई घरबाटै काम गर्न सहुलियत प्रदान गर्नु पर्छ ।
प्रेजेन्टिज्ाको छुट दिनु कुनै पनि कम्पनीको लागि अस्वस्थ व्यक्तिलाई छुट्टी लिने माहोल बनाउनु भन्दा महँगो सावित हुनसक्छ । मानसिक स्वास्थ्य वा अन्य समस्याको हकमा सुरुवाती चरणमै विरामीले आराम पाएमा व्यक्तिलाई स्वस्थ हुन धेरै समस्या हुँदैन ।
अध्ययनमा महत्वपूर्ण कुरा के पाइएको थियो भने यदी संक्रमण भएको शुरुको एक वा दुई दिन घरमा नै बस्ने छुट पाइने हो भने एक दिनको छुट्टीले लगभग १७ हजार मानिसमा ( लगभग २५ प्रतिशत कमी) तथा दुई दिनको छुट्टीमा २६ हजार मानिसमा (लगभग ४० प्रतिशत) संक्रमणको कमी हुने पाइएको थियो ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार जति छिटो प्रवन्धकलाई आˆनो कर्मचारीको समस्याबारे जानकारी हुन्छ, त्यति नै राम्रो हुन्छ । किनकी विरामी हुनासाथ यसको जानकारी हाकिमलाई दिएमा सम्मान त बढ्छ नै, कर्मचारीको अनुपस्थितिमा काम गर्न प्रबन्धकलाई पनि पर्याप्त समय मिल्छ । अझ ठूलो कुरा त के हो भने इमान्दारिता भएमा कुनै पनि गलतफेमी वा मनमुटावबाट बच्न सकिन्छ ।
मार्सेन यो पनि मान्छन् कि प्रबन्धक दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा जो सोच्छन् कि कर्मचारी काम गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई नियममा बाध्न जरुरी छ । यस्तो सोच राख्ने प्रबन्धले आˆनो कर्मचारीले जस्तोसुकै कुरा पनि सोच्न सक्छन् ।
दोश्रो किसिमका प्रबन्धक त्यस्ता हुन्छन्, जो उचित मानक राऋछन् र आˆनो आˆनो कर्मचारी माथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छन् । यस्ता प्रबन्धकको जिम्मेवारी यहीको कि कार्यस्थलमा यस्तो संस्कृतिको विकास गर्ने की कर्मचारी स्वंय विश्वसनीय बन्न सकुन् । यसको लागि सर्वोत्तम तरीका यही हो कि आˆनो बारेमा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु हो ।
जनकपुर बमकाण्डका आरोपी पूर्वमन्त्री सहित ७ जनालाई जन्मकैद
चुनाव जिते हरेक घरलाई १० लिटर रक्सी